Ingabe ama-parrots afaneleka njengezilwane ezifuywayo? Amathiphu ngenhlalakahle yezilwane
Isimo esifanelekayo sezinhlobo zezitshalo ezinama-aviary real
Ama-parrots ayizilwane ezithokozisayo
Isexwayiso sokukhulisa ngesandla
Ama-parrots abhekwa njengenye yezinhlobo zezinyoni ezinhle kakhulu emhlabeni. Kuze kube yizinhlobo ze-350 zingahlukaniswa, kufaka phakathi i-subspecies ye-850. Izinhlobo ezihlukahlukene zezinyoni manje zingamhlonishwa emhlabeni wonke, ngakho-ke lezi ziba zithandwa kakhulu futhi ngokuvamile zibhekwa njengezilwane ezifuywayo ngenxa yobuhle bazo.
Izindlu - Ukunakekelwa - Ukuqashwa - Ukudla kwama-parrots
Izinyoni zitholakala e-Australia, eMelika noma eNew Guinea, kodwa zingagcinwa emhlabeni wonke futhi zikhule zibe yi-100 ubudala. Kodwa ingabe isimo sengqondo se-parrot siyindlela ehlukile kunezinja, amakati noma i-pig Guinea?
Ingabe ama-parrots afaneleka njengezilwane ezifuywayo?
Ngezinyoni zezinhlobo zonke, ukugcina i-cage ngeke neze kube yimiqondo efanele-yezinhlobo. Noma kunjalo, lokhu akunakugwemeka abaningi abanikazi bezinyoni. Ngakho-ke, kubalulekile ukunaka i-aviary enkulu, amakheji amancane kunamamitha angu-4 ubude namamitha angu-2 ububanzi, kanye nokuphakama, kungaba yingozi ngobubi bezilwane futhi mhlawumbe bakhonze njengendawo yokulala.
Eqinisweni, isimo sengqondo se-parrot singaba yiqiniso kuphela ezinhlobonhlobo lapho izinyoni zine-aviary enkulu yangaphandle, kuhlanganise nesiphephelo esikhulu esinomlilo.
Ngokungafani nezinja noma amakati, lezi zinyoni kufanele ziqaphele umswakama ofanele ekamelweni. Ngisho ebusika, lokhu kumele kube okungenani amaphesenti angu-60.
Ngubani onokutshala izitshalo eziningi ekamelweni kungenza kube nomswakama okhulayo. Ngaphezu kwalokho, ama-parrot angasetshenziswa izikhathi eziningi ngosuku ngamanzi amancane. Uma umswakama uphansi kakhulu, ama-parrothi angathola isifo samaphaphu esibi futhi ekugcineni afe.
I-interior of the aviaries ibaluleke kakhulu. Ama-plastiki, noma i-beech izinkuni zezinkuni kufanele athathe indawo yamagatsha asokwemvelo, njengezihlahla zezithelo, ama-willows noma izihlahla ze-lime. Amazinyo asheshe futhi izintambo azikho ngisho neze. Ngakho, ukuvuvukala kwezinyawo kungavinjelwa.
Futhi, isihlabathi esise-aviary akufanele sibe ngothuli, kunalokho, yisisusa sephephandaba, okufanele sishintshwe nsuku zonke. Futhi ama-shreds e-beechwood afaneleka njengesembozo.
Ukuze ugweme inhlamba enamandla ensimbi kuma-parrots, okungabangela ukuqhuma njalo kwizinto zonke, ama-aviaries akufanele abe ne-powder yokugqoka noma upende. Izinsiza ezenziwe ngensimbi engagqwali zingcono kakhulu.
Ukudla kokusanhlamvu okutholakala ngokudayisa okuyimfucumfucu kuyakulungele ukudla okunomsoco. Kodwa-ke, ukunakekelwa kufanele kubhaliswe lapha ekudleni okungeziwe. Izithelo nemifino zinganikezwa nsuku zonke ama-parrots. Cishe zonke izinhlobo zifanele futhi zithandwa.
Ngokwemvelo, amaproti akuzona ukudla okumsulwa okuhlanzekile kodwa adinga ukutholakala njalo kwezithelo. Umthwalo wezinhlamvu ezibunjiwe ekudleni kokusanhlamvu kufanele futhi unciphise okunye. Ukuze uthole isisindo namanzi kufanelekile. Ukudla kungenziwa kancane kancane, kodwa kufanele kuvuselelwe okungenani kabili ngosuku. Ukutholakala kwamanzi okwanele kusekhona amanzi amaminerali kufanele athengwe. Amanzi okupompa ayengaba ne-sodium eningi kakhulu futhi awonakele kakhulu izinso ze-parrot.
Indiza yansuku zonke yamahhala kumele iyingxenye yohlelo lwesikhashana lokugcina ama-parrot enempilo. Izinyoni ezingakwazi ukundiza ziyogula ngokushesha, zithole izifo ze-abscesses noma izifo zamaphaphu.
Uma ufuna ukuthenga i-parrot, kodwa angazi ukuthi ama-parrots ayizilwane ezithokozisa kakhulu, kufanele acabangele ukuthenga futhi. Ukuphoqelela i-parrot ukuma yedwa kungabulala i-parrot. Ama-parrots angase avele ekucindezelekeni okujulile ukwenqaba ukondla futhi ekugcineni abe nesizungu ngokuphelele futhi afe.
Kodwa-ke, akuzona izinhlobo ezahlukene zama-parrot okufanele zigcinwe, kodwa mhlawumbe uhlobo olufanayo kufanele lukhethwe. Kungakhathaliseki ukuthi i-parrot isetshenziswa ngabantu kangakanani, ayikho enye indawo. Kunamathuba amaningi emisebenzi ngama-parrots, ngoba aphakathi kwezilwane ezihlakaniphile kakhulu.
Ukufunda ngamasu kudinga ikhanda. Ezincwadini noma kwi-intanethi uzothola amathiphu amaningi kanye namaqhinga azungeze amathuba okuqashwa ama-parrots.
Ngeshwa, le nhlobo ithandwa kakhulu ngokugcina izinyoni zezinyoni. Yiqiniso, abanikazi bafuna ukuthi izilwane zibe njengezintombi futhi zithandeke ngangokunokwenzeka. Noma kunjalo, ingaba nezimo eziphawulekayo zokuziphatha ngisho nezinkinga ezingenzeka. Lezi zingabonisa, ngokwesibonelo, ekuzibophezeni, uma lokhu kukhipha izimpaphe futhi kuvele buqili.
Amanye ama-parrot akhuliswa ngezandla angaba nolaka kakhulu kubantu. Ukuqapha kufanele kusetshenziswe ikakhulukazi ngama-amazons, cockatoos kanye nama-macaws.
Labo abathintekayo ngenhlalakahle ye-parrot kufanele bazenze ngokwabo futhi i-parrot bayamukele futhi bathenge umuntu owaziyo kakade ukuphila emaqenjini futhi wakhuliswa izilwane zomzali. Ngisho nama-parrot anjalo angaba nesimo sokubekezela nokuthula okukhulu.
Ingabe ama-parrots afanele izingane?
Kuzingane, i-parrot ayifanelekile. Ngisho nama-parrots asontekile angabangela ukulimala ngamabhere abo. Ngaphezu kwalokho, izingane ezinomsindo ezikhalayo kanye nokuphila kwansuku zonke kunzima kakhulu zingagcizelela izilwane unomphela. Ngaphezu kwalokho, isimo sengqondo esifanele ngempela sezilwane siyinto ebiza izindleko futhi kufanele sicatshangelwe, ikakhulukazi njengoba ama-parrots angase abe mdala kakhulu futhi kungenzeka ukuthi lezi zinyoni ziphila zodwa. Ngakho-ke, okunye okudingekayo kufanele kuqinisekiswe.
I-coloring page yama-parrots